décembre | 2021 | InfoKmada
Lalàna momba ny tany tsy vita titra sy tsy vita kadasitra: natao hanampy ny Malagasy hisitraka ny taniny
InfoKmada - 21 décembre 2021 0
Namaly ny fanambarana nataon’ny firaisamonim-pirenena sasany ny minisitry ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany androany mikasika ilay lalàna momba ny tanin’olon-tsotra tsy vita titra sy tsy vita kadasitra. Namafisiny tamin’izany fa ho an’ny tombotsoan’ny Malagasy, ho fanamorana ny fisitrahan’ny Malagasy ny tany sy ho an’ny tantsaha ny votoatin’ity lalàna ity. Diso tanteraka ny filazana ny mifanohitra amin’izay, rah any fanambarana navoakan’ny minisitera ihany koa.
Distrikan’i Lalangina : miisa 1 600 ireo nisitraka ny karatany faobe
Karatany miisa 1 600 androany no nozaraina tao amin’ny disitrikan’i Lalangina faritra Matsiatra ambony tamin’ny alalan’ny fizarana karatany faobe notanterahin’ny teo anivon’ny minisiteran’ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany niarahana tamin’ny minisiteran’ny fambolena sy ny fiompiana ary ireo mpiara-miombon’antoka. Tanjona fanampiana ireo tantsaha hisitraka ny karan-tany ary hanatanteraka ny asa fanajariana mifanaraka amin’ny fiarovana ny tontolo iainana.
Fanavaozana ny sarintanin’i Madagasikara : efa hisy ny vokatra azo ho ampiasaina
Voahaja ny tetiandro napetraka mikasika ny fanavazaona ny saritanin’i Madagasikara tanterahin’ny eo anivon’ny foiben-Taosarintanin'i Madagasikara hiarahana amin’ireo mpiaramiombon’antoka. Ny volana janoary izao no vinavinaina hisy sarintanin’ny faritra maro ho vita.
M/S Francia : olona 16 tamin’ireo mpandeha 230 hatreto no hita faty, ny 50 velona
Miisa 16 hatreto no hita faty, 50 hita velona tamin’ireo olona miisa 230 niaraka tamin’ilay lakanaantsoina hoe FRANCIA izay dobo teo anelanelan'Andrangazaha sy Antsiraka ny maraina teo tokony ho tamin’ny 9 ora. Olona nandeha nitady vola tany Mananara-Avaratra « saison jirofo » no ankamaroan’ny tao anatiny. Mbola mitohy ny fikarohana hatramin’izao.
Gare routière Maki : niakatra 30% ny saran-dalan’ireo taxi-brousse
Niakatra 30% avokoa ny saran-dalana ho an’ireo taxi-brousse miainga etsy amin’ny gare Routière Maki Andohatapenaka. Ny faharatsian’ny lalana sy ny fiakaram-bidin’ireo kojakoja ilaina amin’ny fiara no isan’ny antony hoy ny filohan’ny kaoperativa.
COVID-19 : natomboka androany ny fanaovam-baksiny ho an’ny CISCO Tanà ville
Mpampianatra sy mpanabe miisa 100 tonga nisoratra anarana no niroso tamin’ny fanaovam-baksiny faobe ho an’ny CISCO Tanà ville androany. Mbola hitohy ny hetsika ary hatao vaksiny avokoa ireo mpampianatra resy lahatra hiroso amin’izany. Tanjona ny fahafahana miatrika ny telovolana faharoa anatin’ny fahasalamana tanteraka.
Fiompiana omby : « hémoparasitoses » no aretina miparitaka ankehitriny
InfoKmada - 14 décembre 2021 0
Hémoparasites no aretina mahazo ireo omby amina faritra 04 eto Madagasikara amin’izao fotoana izao hoy ny tomponandraikitra eo anivon’ny minisiteran’ny fiompiana. Efa voafehy ny aretina na nisy aza ny fahatarana ka nampiparitaka izany raha ny fanazavana, saingy tokony samy ho mailo ny mpiompy.
Covid-19 : mihoatry ny 500 isan-kerinandro ny tranga voamarina
Miverina mirongatra ny Covid-19 eto Madagasikara ary ny faritra Analamanga hatreto no tena ahitana betsaka ny tranga voamarina. Ho an’ny toeram-pitsaboana tsy miankina iray nanaovana fanadihadiana, amin’ny olona 40 mahery raisina isan’andro, 99% amin’izay no olona voan’ny Covid-19. Miantso ny rehetra amin’ny fandraisana ny andraikitra mifanandrify amin’izay ny mpitsabo nanaovana fanadihadiana.
Fisitrahana tany : zava-dehibe ny fananana lalàna miaro ny tantsaha amin’ny zony
Isany miteraka olana sy ahazoana fitarainana maro amin’ny lafiny fananan-tany ny fisian’ny fanararaotana ataona olona manam-bola ka milaza fa tompon’ny tany na tsy nanamainti-molaly ny tany aza. Isany ahitana tranga betsaka amin’izay ny ao amin’ny Distrikan’Ankazobe, araka ny nambaran’ny Ben’ny tanàna any an-toerana. Zava-dehibe hiarovana ny tantsaha sy ny olon-tsotra, hiadiana amin’izay ny fananana ny lalàna mikasika ny propriété foncière privée non titrée, miompana amin’ny fanomezana vahana ny fisitrahan’ny tompon’ny tany ny zony feno, sy hiarovana ny zon’ny tantsaha. Dingana natao hanatsarana ny sehatry ny fananan-tany ihany koa ny fizarana Titre faobe, tahaka ny notontosaina androany tany amin’iny distrika iny.
Faritra Analamanga : natomboka ny famolavolana ny fametrahana drafi-panajariana
Sakana ho amin’ny fampandrosoana ny faritra ny tsy fisihan’ny drafim-panajariana, na eo aza ny fahamarohan’ireo harena voajanahary raha ny nambaran’ny tomponandraikitra. Manoloana io, tontosa androany ny fanombohan’ny famolavolana ny fametrahana izany ho an’ny faritra Analamanga hiarahana amin’ny minisisteran’ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany. Tanjona ny hamaritana ny drafim-pampandrosoana ny faritra mandritra ny 20 taona raha ny fanazavana.